A mgbatị na-anaghị — njem Lee - Official Site
A mgbatị na-anaghị
Ná ndụ, M na-arahụ site na oge mgbe m na a n'ezie kpaliri na-arụ ọrụ. Mgbe m nọ n'ụlọ akwụkwọ sekọndrị, m dị nnọọ chọrọ ịbụ buff iji na-adọta mmasị ụmụ agbọghọ (m dara). Ke ọnwa tupu m agbamakwụkwọ m na-agbalị ịrụ ọrụ na m honiimuunu osimiri ahu. Ụbọchị ndị a, M na-nnọọ na-agbalị iji jide n'aka na m na-ebi gara aga m n'afọ iri abụọ. My mkpali gbanwere ihe karịrị afọ, ma ihe agbanwebeghị bụ otú fickle ndị mkpali na-.
Ma eleghị anya, ị na-ndammana kpaliri na-arụ ọrụ-nkpu pua ndị enyi m biputere eserese na vidiyo nke ha ọzụzụ Usoro ụbọchị ọ bụla. Ma ọ bụrụ na ị dị ka m, gị mkpali aga na ala ka a nwa ewu on a trampoline. Gịnị ma ọ bụrụ na ya pụta si arụ ọrụ gị si dịruru ruo mgbe ebighị ebi, ezie na? Ị ga-enwe ihe kpaliri?
Ike ọrụ ahụ rụpụtara
N'oge na-Winter Olympics ikpeazụ nke ọnwa wụrụ m ibobo dị ka m na-ele àmụmà ngwa bobsledders na highflying snowboarders. M ha masịrị egwuregwu mma, ma m ọbụna karị masịrị mgbe m chere banyere ha ahụhụ ọzụzụ ọ na-aghaghị iwere iji ruo ebe ahụ.
Ná ngwụsị nke ọ bụla omume mgbe mmeri na-eme egwuregwu guzo-kwa-eto eto si podiums, na ịmụmụ ọnụ ọchị na on ihu ha na Ọla-ezu ike na ha chests, ha na-aghọrọ na uru nke ha ọzụzụ. Ma dị ka Bible, e nwere ihe a ka elu ụdị ọzụzụ-ọ bụghị n'ihi na-azụ ahụ na-abaghị uru, ma n'ihi na ọ na-ejedebeghị.
Ọ bụrụ na gị na mgbe na-eche ihe Chineke na-eche banyere gị arụsi, ebe a bụ azịza: Ọ na-eche na o nwere uru, ma ejedebeghị, uru. Ya mere, mgbe ị na-agba ọsọ, eme u, na ibuli ihe dị arọ, zuo ike na ihe ọmụma na ọ bụ a ezi ihe na-eme. Edebe gị ahu nọrọ n'ọnọdụ dị mma mma-ọbụna mara ihe-ma ọ bụ naanị aga ga-esi gị otú anya.
Nke a bụ ihe Onyeozi Pọl gwara Timoti,:
"Ma nwere ihe jikọrọ ya na enweghị nsọpụrụ o na-enweghị isi na myths. kama, zụọ onwe gị na godliness, maka ọzụzụ nke ahụ nwere a ole na uru, ma godliness bara uru n'ụzọ ọ bụla, ebe ọ bụ na o nwere nkwa maka ndụ a dị ugbu nakwa maka ndụ na-abịa." (1 Timothy 4:7-8)
Anyị nwere ike N'igbu ya ná nkenke Paul echiche arụ ọrụ dị ka nke a: -Azụ ahụ dị mma, ma ọzụzụ ime mmụọ dị mma. Ma nke ahụ bụ n'ihi na nkịtị ike bụ ruo nwa oge, mgbe godliness bu ndu ebighi. Mgbe Paul okwu banyere "ọzụzụ maka godliness" Echere m na ọ pụtara ime ihe ndị na-eme ka ị n'ụzọ ime mmụọ siri ike. Ọ pụtara dika ihe-eme na-eme ka i ihe Chineke. Ma eleghị anya, na-eweli anyị Bible bụ ọbụna na-erughị achọsi ike karịa eweli a arọ, ma eleghara ọ pụtara na anyị atụ uche si na ihe karịrị ezi ahụ ike.
Ruo mgbe ebighị ebi Dị Mma Karịa oge
Anyị niile maara na mgbe ihe dịruru ogologo na ọ bụ ihe na-achọsi ike. Ọ bụla aka ekedep a ụgbọ ala ebe ọ maara na ọ ga-akwụsị ịrụ ndị na-esonụ ọnwa. Anyị ga kama ịzụ ihe na dịruru a mgbe, n'ihi na anyị ga-enweta ihe si na ego. Ma ọ bụrụ na anyị na otú gbakọọ na mkpebi banyere ụgbọala, otú ọtụtụ ihe ndị ọzọ na gbakọọ ka anyị kwesịrị banyere mkpụrụ obi anyị?
Ugboro ole ka ị na-eche banyere gị mgbe ebighị ebi? Nke bụ eziokwu bụ, Anyị kwesịrị icheta ihe ọ na ndị mmadụ n'anya. E nweghị ajụjụ na anyị nile ga-adị ndụ ruo mgbe ebighị ebi; ajụjụ bụ ihe na ruo mgbe ebighị ebi ga-adị ka. Ya mere, anyị kwesịrị ime ka investments now, ebe ọ maara na ndị na-esi agaghị akwụsị akwụsị.
Nke a kwesịrị mmetụta ihe anyị elekwasị anya na site n'ubọchi rue ubọchi. Sports dị mma, ma ha na ọ bụghị ihe niile. Gị ume anụ ahụ pụrụ itinye gị ná mahadum, ma ọ gaghị enweta na ị n'ime Eluigwe. Ị ga-akpachapụ anya gị ahu, ma anyị nwere ihe ka arọ na-elekọta. Olee otú ike bụ mkpụrụ obi gị?
Olee otú Iji Zụlite
Chineke na-enyere anyị iwu "ime mmụọ muscle" mgbe anyị ka na-aga nke mmehie na jidere a jide Jesus. Mgbe ahụkwa ọ na-eziga anyị mgbatị. Ọ na-amara na-enyewo anyị Okwu ya, ndị ya, na ọbụna ya ntị. Ya mere, ka na-agụ, mkpakọrịta, na-ekpe ekpere. -Eme egwuregwu na-azụ siri ike n'ihi na ha chọrọ ka a kwadebere maka egwuregwu ma ọ bụ egwuregwu n'ihu ha. Ha na-achọ na-enwe ike na-asọrịta mpi na a elu larịị.
Anyị nile ga-eche ihu ime mmụọ ule, idomo, na agha adị kwa ụbọchị. Ị na-akwadebe? Coasting anaghị arụ ọrụ maka-eme egwuregwu na ọ ga-arụ ọrụ maka Ndị Kraịst. N'afọ gara aga, ọgụgụ Bible bụ ezughị iji kwagide gị afọ a. Anyị ga-eme ka ya site na a marathon Chineke amara, ma ọ akwadebe anyị maka agbụrụ site ime mmụọ anyị mmega.
Ọ bụ aka m icheta na mgbe uru nke na-azụ ahụ na-ejedebeghị, uru nke ọzụzụ ime mmụọ na-akparaghị ókè. On ụbọchị ndị ahụ gasịrị mgbe m na-eche dị ka na-ekpe ekpere ma ọ bụ ịgụ Okwu Chineke, M nwere ike echetara onwe m na uru bụghị obere ma ọ bụ ruo nwa oge. Ọ ga-ọ bụghị nanị na-enyere m n'izu ọzọ, ọ ga-enyere m na-esote ndụ. Nke ahụ bụ niile na-akpali m mkpa.
Theodora • March 11, 2014 na 10:40 Abụ • zaghachi
Nke a n'ezie gọzie m…!!!Daalụ!!& Chukwu gozie gị….ekele unu maka ikwe ka onyenwe iji ị.
Matt Smethurst • March 11, 2014 na 10:42 Abụ • zaghachi
Daalụ maka nke a okwu ọma, njem.
Daniel DryIce Reyes • March 11, 2014 na 10:44 Abụ • zaghachi
Njem ekele unu maka nke a. N'ihi na n'oge gara aga izu m na e-atụ egwu ọnwụ. Amaghị m ihe m mere ma m na-eme. M n'ezie mkpa ka e chetara na heaven bụ ihe kasị mma mgbe na ụwa a ga-esi m ihe ọ bụla.
vizlyfe • March 11, 2014 na 10:47 Abụ • zaghachi
Nke a bụ egwu! ekele fam! Ị a anụ ọhịa!
GregBrown • March 11, 2014 na 11:06 Abụ • zaghachi
Daalụ maka nke a bit nke agbamume! Ọ dị mfe, n'ihi na ụfọdụ n'ime anyị na-ekwe ihe na-eri ike ma na-egosipụta. Ma ị na-eji oge na-eme atụmatụ gị nri na a na-amụ, karịa n'oge nke ikpe ekpere na-amụ Okwu? Ọ dị mfe ka gị na-ebute ụzọ messed elu, ọbụna na ozi ubi.
Ngọzi Christ niile!
Matt • March 11, 2014 na 1:18 pm • zaghachi
ekwenyere m. The ime mmụọ mma / mmega bụ nnọọ mkpa karịa ihe ọ bụla anụ ahụ mma / mmega, ma m na-kweere na ma nwere ike mere n'otu oge dị ka nke ọma. M maara na e a mma dị n'etiti na-arụ ọrụ maka onwe gị na-arụ ọrụ n'ihi na Chineke, ma na e nwere ihe dị iche (kwere na ya ma ọ bụ na). -Arụ ọrụ n'ihi na Chineke, ikpọkidem, agụnye ime mmụọ mmewere. Dị ka ọmụmaatụ, mgbe i nwere a mgbatị onye, unu abụọ okwu oge mgbe ị na-mgbatị ọnụ. Kere ma ọ bụrụ, mgbe ị na abụọ okwu, na ọ bụ banyere a mgbapụta, gị uru, etc. Kama, mgbe ị na-agwa, na-ekwu okwu si gị n'obi, na nwere ofufe ibe na Christ. The anụ ahụ na-arụ ọrụ si nwere ike a nkịtị mmasị n'ebe ndị na-mgbatị, ma ọ bụrụ na ị tinye ime mmụọ akụkụ, gị mma na-aga na na unearthly larịị (nri ebe anyị na-kwesŽrŽ ka), agbasa ịhụnanya nke Kraịst. Ndị Kọlọsi 3:17
Casey • March 11, 2014 na 1:34 pm • zaghachi
Ọ juru m otú Jehova na-ekwu na ọtụtụ ụzọ dị iche iche. M na-atụgharị n'uche nke “M ga na-arụ ọrụ taa” ma obi dị m ada na mpaghara ebe a ugboro ugboro ma na-enyetụ na-eche na ọ ga-egbughị oge ma ọ bụrụ na ọ bụghị ihe na-aga n'ihu na ndụ m. -Agụ nke a blog na-a na-echetara na Chineke na Ọ>M na mgbe m na-elekwasị anya na Ya na-azụ ime mmụọ, M na-eche nnọọ mma na-atụkwasị obi na ọ bụghị oge egbughị. M na-eche na-anọ ike dị mkpa ma m maara na egwu ala n'ime okwu ya na-achọ ya kwesịrị nnọọ ọ bụla nke abụọ nke ndụ anyị. Oge na Chineke na mgbe egbughị. Daalụ maka na-erubere Chineke isi ka ihe Kraịst na-akpọ gị ka i soro. M mkpa a. Chineke na-agọzi Gị na ezinụlọ gị Njem!
njem Lee • March 11, 2014 na 4:28 pm • zaghachi
Kpomkwem, ọ bụla otu nke abụọ bụ uru ọ. Ụtọ na ị nwere ike na-agba ume!
JB • March 11, 2014 na 2:00 pm • zaghachi
Good stof dị egwu
adonai • March 11, 2014 na 3:18 pm • zaghachi
hey njem, ummm WTF miri-akpali akpali byitself
Donnell • March 11, 2014 na 3:43 pm • zaghachi
Man nke a bụ egwu stof, M hụrụ n'anya ihe ị na-eguzo maka. M n'anya na-amụta site na gị ozizi gị music na ugbu a gị akwụkwọ “The Good Life”.
njem Lee • March 11, 2014 na 4:26 pm • zaghachi
Ụtọ na ị nwere ike na-agba ume. Na m nwere olileanya na akwụkwọ nwere ike na-enye aka n'ihi na ị na ọtụtụ ụzọ!
MrsRondo • March 11, 2014 na 4:25 pm • zaghachi
Nke a bụ egwu. The ihe abụọ m na-enwe olileanya inweta na-ejigide afọ a ma m ọgụ na mgba onye na bụ nnọọ mkpa karịa ndị ọzọ. ekele Njem, gị adọ blọọgụ nwere nnọọ egwu, na ha mgbe niile na-ezo m azụ Superstar.
Ịkụ gọlfụ-okoro • March 11, 2014 na 5:16 pm • zaghachi
Bro nke a bụ ihe m mkpa. M na a na-alụ na-alụ ọgụ na mmụọ nke ikpeazụ di na nwunye nke ụbọchị. Dị nnọọ chefuo ekpe ekpere, -agụ m na Bible, na ọbụna na-aga chọọchị. Nke a bụ na-edemede oku. Site ugbu a na m na a gbanwere agbanwe nwoke Christ. M ọbụna chere Chineke ga-n ogologo m ntị n'ihi na m adịghị asọpụrụ Chineke ndụ. Jizọs nwụrụ n'elu obe n'ihi m na m maara na m na mgbe niile na-anabata na ọnụnọ ya na ọ bụ nnọọ na-ekwesị ntụkwasị obi ka ọ gbaghara m si m na mmehie m.
Bro m ekele Chineke maka ndụ gị, na oké ọrụ ya ọ na-eme site na ị. Chineke na-agọzi gị maka ịnakwere ọrụ ya.
Nọrọ gọzie nwanne m nwoke.
Keinya • March 11, 2014 na 5:31 pm • zaghachi
Na-ezo nke ọma e! Daalụ! = o)
RobJohnson • March 11, 2014 na 5:47 pm • zaghachi
gọzie ma na-akwali na nke a. ekele Njem!
Liam • March 12, 2014 na 12:00 Abụ • zaghachi
Ịkwada gị posts mgbe niile iru m na nke zuru okè oge. Nọgidenụ na-na-ekwe ka Chineke na-arụ ọrụ site n'aka gị, enyi m
Joshua Galvin • March 12, 2014 na 2:18 Abụ • zaghachi
Maa mkpa a dị egwu. Daalụ maka agbamume.
Mistry • March 12, 2014 na 3:28 Abụ • zaghachi
deeeeep struff Njem, bụghị ihe anyị na-emekarị na-ekwu banyere. Biko, -gị na posts na-abịa.
Vicmonyi • March 12, 2014 na 1:06 pm • zaghachi
tirsit • March 13, 2014 na 12:26 pm • zaghachi
Nke a bụ ndụ m na m na-ịmụta onwe m na, Chineke gọzie y Njem!!
Clay • March 13, 2014 na 12:35 pm • zaghachi
Renee • March 13, 2014 na 9:54 pm • zaghachi
Right na oge nwanne. Daalụ! Chukwu gozie gị!
Sophie • March 19, 2014 na 5:14 pm • zaghachi
Amen. Daalụ maka eziga ozi a. Anyị niile kwesịrị ya. otuto Chineke.
E_Jay • March 24, 2014 na 2:09 Abụ • zaghachi
Chineke na-agọzi gị n'ihi na nke a.. Biko chọta nkwali na agbamume na yur n'oge mkpa… Amen
Nia • March 24, 2014 na 7:13 pm • zaghachi
Good Stuff. Great amaokwu.
Solomon • March 26, 2014 na 6:55 pm • zaghachi
Daalụ maka ikwesị ntụkwasị obi gị na Jehova njem. Echere m na ị mkpa dee a abụọ akwụkwọ.
LoganLong • April 1, 2014 na 11:45 Abụ • zaghachi
M na-eche na nke a bụ nnọọ mkpa na anyị omenala taa. Olee mgbe ị na-ahụ ndị mmadụ na-amụ ọtụtụ awa? njem, M na-arụ ọrụ na YMCA na m na-ahụ otu ihe ahụ ndị mmadụ ụbọchị na ụbọchị maka dịkarịa ala otu awa nke na-arụ ọrụ si, ma n'ozuzu karịa na. Na ọ na-akawanye na ị na-eche echiche, e bụ eleghị anya a otutu Kraịst na-abịa n'ime m Y (Anyị na-na na ndị kasị ibu Indiana), olee otú ọtụtụ n'ime ha na-eji 1-2 awa ụbọchị ekere òkè ha n'ọrụ ime mmụọ? Nke a bụ mkpa ka m n'ihi na ọ bụ oku na-aga si dị m mkpa na-azụ ke udi n'ụzọ anụ ahụ na n'ụzọ ime mmụọ. Daalụ nwanne.
Marjorie • April 2, 2014 na 12:20 Abụ • zaghachi
Amen, ekele maka ncheta!
Oritsegbemi • April 17, 2014 na 6:39 Abụ • zaghachi
Nke a bụ a okwu na oge! Chukwu gozie!
Josh • April 26, 2014 na 4:38 Abụ • zaghachi
Nke a bụ a okwu na-a-oge. Na a omenala na e nwere ọtụtụ na-elekọta mmadụ nsogbu anya ọma na n'ihi na ụmụ okorobịa na-ekwesị na 'buff', anyị nwere ike ina otú ịdaba n'ihe anyị na-eche na anyị kwesịrị ịdị ka, na ihe ndị ọzọ na-agwa anyị na anyị mkpa ka anya dị ka.
Na-asị na Chineke na-eche na-arụsi ọrụ abaghị uru bụ ntụpọ na, tụnyere mgbe ebighị ebi anyị ga-emefu na Chineke.
Nke a na-echetara m nke David akụkọ mgbe ọ na-eze e tere mmanụ site Samuel 1 Samuel 16). Chineke na-ekwu na amaokwu 7, “People anya na ihe anya na, ma Jehova na-ele obi.”
MannyRuiz • Ka 17, 2014 na 2:05 Abụ • zaghachi
N'ezie na-agba ume Njem! Ihe ọ bụla na-akawanye m bịarukwuo Chineke nso n'ezie na-eweta m obi ụtọ na-enyere m! Ya mere ekele gị nwoke. M kpọrọ ihe n'ezie ị. M ga na-ekpe ekpere ka unu :)
Liam • June 21, 2014 na 10:27 Abụ • zaghachi
Njem m nnukwu n'ime-arụ ọrụ, ma m ga-echetara onwe m na-agụ nke a post ọ bụla mgbe a na mgbe. Na-enyere aka na-m na-elekwasị anya ihe dị mkpa n'ezie
Brian • July 4, 2014 na 9:33 Abụ • zaghachi
Chaị ka a ibe blogger m n'anya ọdịnaya nke a. M a mgbatị buff ma ọ na-abịa mfe karịa mgbe ụfọdụ ịchọta oge ịtụtụrụ m Okwu ya kwa ụbọchị. M mgbe eche ihe mere na anaghị m na-eguzo ruo ọnwụnwa dị ka m ga. Awesome ncheta. ekele Njem
gnocchi • July 21, 2014 na 6:22 pm • zaghachi
Nke a bụ n'ezie na-agba ume na ọ dịla ihe na-na-a na uche m. M na-adịghị na-agụ m Bible kwa ụbọchị, n'ezie, M nwere ike ịga maka 2 ma ọ bụ 3 ụbọchị na-enweghị na-na-eleta Okwu Chineke…ma ugbu a, m maara na m na-ịgọnahụ onwe m ebighi uru. Ọ pụtara ọtụtụ ihe m na ihe m na-agụ taa ga-enyere m izu ma ọ bụ ọnwa na-abịa. M ike ịdabere na ihe m mere n'afọ gara, ma ọ bụ ikpeazụ izu…M na-arụ ọrụ maka m mgbe ebighị ebi!!
Nsọpuru-Chineke nwere uru maka ihe niile na-ejide nkwa maka ma ugbu ndụ na ndụ na-abịa!
Ekele Njem Lee, n'ihi ikwe ka Chineke na-arụ ọrụ site n'aka gị…Imma agụ Okwu! :)
Deborah • November 20, 2014 na 12:26 pm • zaghachi
A n'anya post! M n'anya mmega & M hụrụ Chineke n'anya ma m maara na ime mmụọ m mma bụ m mkpa.
Ngosa • April 14, 2015 na 6:33 pm • zaghachi
na dị egwu ozi Njem, M mgbe nile na-eche ma na-arụ ọrụ si na-ezighị ezi ma ọ bụ ma ọ bụ nanị na-enweghị isi. Your analysis wepụrụ ndị ikuku na na otu. Thanx, na-BRAGING Bro!!